यी हुन् संसारकै लामो कार, जहाँ हेलिप्याडदेखि स्वीमिङ पुलसम्मका सुविधा छ ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»रोचक खबर»यी हुन् संसारकै लामो कार, जहाँ हेलिप्याडदेखि स्वीमिङ पुलसम्मका सुविधा छ !
यी हुन् संसारकै लामो कार, जहाँ हेलिप्याडदेखि स्वीमिङ पुलसम्मका सुविधा छ !
By रिता घिसिंग on २५ भाद्र २०७५, सोमबार ०८:१८ रोचक खबर
एजेन्सी : संसारकै सबैभन्दा लामो कार ‘लिमोजिन’ जसलाई ‘अमेरिकन ड्रीम’को उपमा दिईन्छ । उक्त कारमा स्वीमिङ पुलदेखि हेलिप्याडसम्मको सबै सुविधा रहेका छन् । यस कारको लम्बाई १०० मिटर रहेको छ कारमा अगाडि र पछाडि गरेर दुईवटा क्याबिन रहेका छन् ।